मोदीको हतार हतारको भ्रमणः उपादेयता चाहिं के रह्यो ?
भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी नेपालको राजकीय भ्रमणमा बैशाख २८ मा आउनु भयो र २९ गते नै जानुभयो । पहिलो दिन जनकपुरमा सीतामाताको पूजा अर्चना गर्दै अभिनन्दित हुनुभयो, उच्चस्तरीय भेटघाट भयो ।
मोदीजी ! कोशीको पवित्र जल छोएर, लुम्बिनीको माटो समाएर, पशुपतिको चन्दन लगाएर, जानकीको कसम खाएर भन्नुस् मैले गल्ती गरेँ माफ पाउँ । यति भनेर यो तीर्थाटन पुरा गर्नुस् अनि ब्यबहार र प्रतिबद्धता पनि त्यस्तै गर्नुस् । सबैभन्दा पहिले मनको कालो पखालेर जानुस्, नेपाली जनतामा भएको घृणा मेट्ने बचन बोलेर जानुस् र अर्को पटक असल छिमेकी भएर आउनुस् । नेपाली जनताले तपार्इको सब नाजायज भुल बिर्सेर भब्य सभ्य नागरिक अभिनन्दन गर्नेछन् ।
जय सिण्डिकेट !
पेशल आचार्य/ यतिखेर नेपाल सबैखाले सिण्डिकेटको गहिरो जालोमा जेलिएको रहेछ । अहिलेसम्म सम्पन्न भएका २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र २०७० को संविधानपश्चात् हाल मुलुकमा स्थापित संघीय शासन व्यवस्थालाई समेत हेर्दा देशमा शासनका शैली र शासकहरू मात्र बद्लिएका रहेछन्, सारमा जनताले सैद्धान्तिक रुपमा खोजेको र भित्री दिलबाटै चाहेजस्तो पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित नै भइनसकेको रहेछ ।
संघीयताको सवालमा नेपाल र स्विटजरल्यान्ड
-लाओस राई संविधान बनेपछि देश नयाँ युगमा प्रवेश भयो भन्दै दिपावली गरी खुशीयाली मनाएको दुई वर्ष पुगेर तीनमा हिड्दै छ । दुवैखाले संघर्ष (शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विद्रोह) को बलमा निर्मित संबिधान २०७२ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा बामे सर्दै छ ।
इतिहास र बर्तमानलाई साक्षी राखेर कांग्रेसले गर्नैपर्ने काम
-लाओस राई: सानो छँदा बाजेले सुनाउँथे, तिनै कुरा आजसम्म पनि भन्दै हुनुहुन्छ, बार्‍ह छोरा तेर्‍ह नाती बुढाको धोक्रो काँधैमाथि ।’ मतलब जति धेरै छोराछोरी भएपनि सबै काम घर बुढोले गर्नुपर्ने भन्ने अर्थमा । बेलामा नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ नत्र छोरो हुनुमा कुनै अर्थ हुन्न भन्ने जस्ता कुरा अझै पनि गर्नु हुन्छ । सानोमा त्यति गहिरो र गम्भीर कुरा बुझ्नै सकिएन, या बुझ्ने प्रयास पनि गरिएन । किनकी पछि नै सिकौंंला जस्तो लाग्दथ्यो । अझै अर्को कुरा पनि भनिरहनु हुन्छ, ‘थोरै भए पुगीसरी धेरै हुँदा गार्‍हो’ । यी दुवै भनाईको अर्थ भने उस्तै उस्तै लाग्छ । सबै जिम्मेवर भएन भने धेरै भएर मात्र केहि हुँदैन भन्ने वा गर्न सकिदैन भन्ने हो ।
‘ग्रीन सिटी’ इलाममा पाहुनालाई रेड कार्पेट
-खेम अधिकारी: इलाम सदरमुकाम खलंगा स्थापना भएको दुईसय बर्ष पुगेको सन्दर्भमा गर्न लागिएको महोत्सवले सदाबहार पहाडकी रानी इलाम दुलहीझैं सिंगारिएको छ । प्राकृतिक एवं साँस्कृतिक सौन्दर्यताले धपक्कै बलेको इलामलाई महोत्सवले छपक्कै छोपेको छ । आफ्नो मधुमासयुक्त प्रकृतिका छटाहरुले पाहुनाहरुको स्वागत गर्न इलाम पलपल आतुर बनेको छ ।
हरिविनोद अधिकारी/ जीवन भनेको भोगाइ रहेछ । जस्ले जस्तो भोग्यो, त्यस्तै धारणा बन्दो रहेछ । मलाई बाहिरबाट सबैले शान्त देख्छन्, धैर्य देख्छन् , खुसी देख्छन् र संयमित देख्छन् । छोरा बुहारी वनबास जाँदा पनि जसले वनबास पठायो, उसैको दरबारमा आरामासँग बसेको पनि देख्नेको कमी भएन । तर म कस्ती छु भनेर मलाई मात्र पो थाहा हुन्छ त ? मलाई कति पिर परेको थियो र कसरी भुुसभित्र आगोलाई छोपेर राखेकी थिएँ भनेर मलाईमात्र पो थाहा थियो त । तर जे देख्छन्, त्यही त भन्छन् होला ।
-संजिव कार्की:... देशको मूल कानुन र संबिधान भन्दा माथि कोहि छैनन् । कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान र एकै हैसियतमा रहनुपर्छ । विधिशास्त्रले कसैलाई नजिक र कसैलाई पर गर्न सुहाउन्न र गर्न मिल्दैन । कानुन नियम र ऐनले तेरो, मेरो र आफु अनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या विश्लेषण दण्ड र पुरस्कार गर्न हुँदैन यो कानुनको पहिलो र अन्तिम शर्त हो । न्यायिक फैसलामा असहमति जनाउन पाइन्छ । मर्का पर्‍यो भन्न पाइन्छ । तर अस्विकार गर्न र अपमान गर्न पाइन्न । पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ,गुनासो राख्न सकिन्छ, म चै मान्दिन भन्न पाइन्न । भलै कतिपय फैसला बिबादित र अशोभनीय नै किन नहुन ? कमजोरी मान्छेले गर्ने हो तर नियत बदनियत र निहितार्थ गरीएको कमजोरी र सामान्य मानवीय भुल फरक कुरा हुन् एकै होइनन् ।
भ्यालेन्टाइन स्पेशल : प्रेमका अनेकौं कथा, अनेकौं विकृती
वाम एकता र राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यबीचको साइनो
हरिविनोद अधिकारी/ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपश्चात् वाम गठबन्धनका बीचमा नजानिँदो तरिकाले अविश्वासको बादल मडारिन थालेको आभास पाइएको छ । त्यसैले नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुने सम्भावना निकट भविष्यमा पनि देखिँदैन । यसलाई नकारात्मक सोचको रुपमा लिन त सकिन्छ, वास्तवमा यो सत्य हो । नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य पहिले सोचिएको थियो—संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि अन्त्य हुन्छ । तर भएन ।